समाचार - अटो पार्ट्सको क्रय कौशल
गाडीको खण्डहरू खरीद गर्ने सीपहरू
१. जाँच गर्नुहोस् कि संयुक्त चिल्लो छ कि छैन। यातायात र स्पेयर पार्ट्सको भण्डारणको बेला, कम्पन र टकरावको कारण, बुर, इन्डेन्टेशन र ब्रेकेज अक्सर संयुक्त भागमा देखा पर्दछ।
क्षति वा क्र्याक, पार्टहरूको प्रयोगलाई प्रभाव पार्दै। खरीद गर्दा जाँच गर्न ध्यान दिनुहोस्।
२. ट्रेडमार्क पूरा भएको छ कि छैन जाँच गर्नुहोस्। बाह्य प्याकिंग प्रामाणिक उत्पादनहरूको गुण राम्रो छ, प्याकिंग बक्समा हस्तलेखन स्पष्ट छ र ओभरप्रिन्ट र bright उज्यालो छ। प्याकिंग बक्स र झोलालाई उत्पाद नाम, विनिर्देशन र मोडेल, मात्रा, दर्ता ट्रेडमार्क, कारखानाको नाम, ठेगाना र टेलिफोन नम्बर, इत्यादि संग चिह्नित गरिनु पर्छ। केही उत्पादकहरूले पनि सामानहरूमा आफ्नो चिह्न बनाउँदछन्। केहि महत्वपूर्ण भागहरू, जस्तै जेनरेटर, वितरक, ईन्धन ईन्जेक्शन पम्प, आदि), प्रयोगकर्ताहरूलाई सही रूपमा प्रयोग गर्न र ठीकसँग मार्गनिर्देशन गर्न निर्देशन म्यानुअल, सर्टिफिकेट र निरीक्षकको छाप लगाइन्छ। खरीद गर्दा, तपाईंले नक्कली र ईन्फेरियर उत्पादनहरू खरीद गर्नबाट जोगिन सावधानीका साथ यो मान्यता दिनुपर्दछ,
Check. जाँच गर्नुहोस् कि घुमाउने भागहरू लचिलो छन्। तेल पम्प र अन्य घुमाउने भागहरू खरीद गर्दा, पम्प शाफ्टलाई हातले घुमाउनुहोस्, जुन लचिलो र स्थिर हुनुपर्दछ। रोलिंग बेयरि purchaहरू खरीद गर्दा, एक हातले भित्री असर रि ringलाई समर्थन गर्नुहोस् र अर्को हातले बाहिरी औंठी घुमाउनुहोस्। बाहिरी औंठी द्रुत र स्वतन्त्र रूपमा घुमाउन सक्षम हुनुपर्दछ, र त्यसपछि बिस्तारै घुमाउन रोक्नुहोस्। यदि घुमाउने भागहरू राम्रोसँग काम गर्दैनन् भने, यसको मतलब यो हो कि आन्तरिक क्षति वा विकृति, खरीद नगर्नुहोस्।
Check. सुरक्षा सतह राम्रो अवस्थामा छ कि छैन जाँच गर्नुहोस्। अधिकांश भागहरू कारखानामा सुरक्षात्मक लेप लगाईएका हुन्छन्। उदाहरण को लागी, पिस्टन पिन र बेयरिंग बुश प्याराफिन मोम द्वारा सुरक्षित गरिएको छ; पिस्टन रिंग र सिलिन्डर लाइनर को सतह एन्टिस्ट तेल संग लेप गरिएको छ, र भल्भ र पिस्टन लपेटेर कागज संग लपेटिएको छ र प्लास्टिक बैग संग छाप लगाइन्छ antirust तेल मा डुबाए पछि। यदि छाप आस्तीन बिग्रिएको छ, प्याकिंग कागज हराएको छ, antirust तेल वा प्याराफिन हराएको छ, यो फिर्ता र बदल्नु पर्छ।
De. विकृतिको लागि ज्यामितीय आयाम जाँच गर्नुहोस्। केहि अंशहरू त्रुटिपूर्ण उत्पादन, यातायात र भण्डारणको कारण विकृत गर्न सजिलो छ। जाँच गर्दा, शाफ्ट भागहरू काँच प्लेटको वरिपरि घुमाउन सकिन्छ कि पार्ट्स र गिलास प्लेटको बीचमा जोडमा हल्का चुहावट छ कि छैन भनेर हेर्नको लागि यो बाnt्ग छ कि छैन भनेर; स्टिल प्लेट वा क्लच ड्राइभ प्लेटको घर्षण प्लेट खरीद गर्दा, तपाईं स्टिल प्लेट र घर्षण प्लेटलाई तपाईंको आँखाको अगाडि समात्न सक्नुहुन्छ यो रेप गरिएको छ कि छैन निरीक्षण गर्न। तेल मोल खरीद गर्दा, फ्रेमवर्क संग तेल मोहर को अन्तिम अनुहार गोल हुनुपर्दछ, जुन झुकाई बिना फ्लैट गिलास संग फिट गर्न सक्दछ; फ्रेमलेस तेल सीलको बाहिरी किनारा सीधा र हातले विकृत हुनुपर्दछ। यो रिलीज पछि यसको मूल राज्यमा फर्कनको लागि सक्षम हुनुपर्दछ। प्याड को विभिन्न प्रकार को खरीद मा, पनि ज्यामितीय आकार र आकार जाँच गर्न ध्यान दिनु पर्छ
Check. भेला गर्नुहोस् कि विधानसभा भागहरू हराइरहेको छ कि छैन। सामान्य विधानसभा भागहरू पूर्ण र अक्षुलो हुनै पर्छ निर्बाध सभा र सामान्य सञ्चालन सुनिश्चित गर्नका लागि। यदि केहि विधानसभा भागहरूमा केही साना भागहरू हराइरहेका छन् भने, सम्मेलनका भागहरू काम गर्दैनन् वा भत्काउँदैनन्।
Parts. जाँच गर्नुहोस् कि भागहरुको सतह रस्ट छ वा छैन। योग्य स्पेयर पार्ट्स को सतह दुबै एक निश्चित सटीक र एक चिकनी फिनिश छ। स्पेयर पार्ट्स जति बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छन्, अधिक परिशुद्धता हुन्छ, र अधिक सख्त एन्टी रस्ट र एन्टी-जंग प्याकेजि is हुन्छ। खरीद गर्दा जाँच गर्न ध्यान दिनुहोस्। यदि भागहरूमा रस्ट दागहरू छन् भने, फफूको दाग वा रबर भागहरू क्र्याक हुन्छन् र लोच गुमाउँछन्, वा त्यहाँ जर्नल सतहमा स्पष्ट टर्निंग उपकरण लाइनहरू छन् भने, तिनीहरू बदल्नु पर्छ।
Check. जाँच गर्नुहोस् कि बन्धन भागहरू ढीला छन् कि छैन। दुई वा बढी भागहरू मिलेर बनेका सामानहरूका लागि, पार्टहरू थिच्दछन्, ग्लुइड गरिन्छ वा वेल्डेड गरिन्छ, र तिनीहरू बीच कुनै ढिलो हुन अनुमति दिइएन। उदाहरण को लागी, तेल पम्प सवार र विनियमित हात प्रेस द्वारा भेला हुन्छ, क्लच संचालित पा wheel्ग्रा र स्टील प्लेट riveted छन्, घर्षण प्लेट र स्टील प्लेट riveted वा चिपका छन्; कागज फिल्टर तत्व फ्रेमवर्क फिल्टर कागजमा चिपकिएको छ; विद्युतीय उपकरणको तार टोकाहरू वेल्डेड छन्। यदि खरीदको क्रममा कुनै ढिलाइ फेला पर्‍यो भने, यो एस